Chine Knitting Machine Fanamboarana Fotsy ny famonosana sy ny orinasa F | Milina Morton
Mitady hery fehikibo amam-bika ve ianao?
Azonao atao ny mahita tanjaka avo kokoa & azo antoka ny fehikibo vita amin'ny milina knitting.
Vidin'ny asa: USD 2-3,5 isaky ny metatra
Min Tahiry Min: 10 metatra
Fahaiza-mamatsy: 35000 pcs isan-taona
1. Fehikibo miendrika kalitao ho an'ny milina mihetsika mivezivezy.
2.No feo, anti-satic, fanoherana ny solika, fanoherana ny hafanana.
3.Higher fehikibo manokana ho an'ny milina mihetsika mitsivalana amin'ny lamba.
Fehin-kibo fanaovan-jaza Morton mampiasa teknolojia fehikibo miendrika seamless, ny tanjon'ny Kevlar mahery vaika dia manana tanjaka hafahafa, kojisija miady amin'ny havizanana ary tsy misy tranga manenjana.
Ny fitaovana vita amin'ny haingam-bokatra vita amin'ny polyurethane rehetra dia voafantina mba hahazoana antoka ny fanoherana ambony ny fehikibo, ny feo malefaka ary tsy misy fikojakojana.
Ny fehikibo Morton Tooth dia manana fahaiza-manao fanoherana avo lenta, fahamarinan-toerana hafainganam-pandeha ambony ary maharitra ela. Izy io dia mety ho an'ny milina fitaterana mivalona boribory amin'ny indostrian'ny lamba, ny indostrian-taratasy ary ny indostrian'ny sakafo. Ny vokatra dia mitazona fahaiza-miasa tsara amin'ny fampitana entana mavesatra. Izy io dia manohana fifandraisana mamatsy ka afaka mifandray amin'ny halavany rehetra.
PRINCIPE MANDRITSIKA NY FAHATSIAROVANA:
Ny familiana fehikibo misy famoronana dia ahitana fehikibo tsy misy fiafarana miaraka amin'ny nify ao anaty perifherin'ny atiny sy ny felany misy nify mifanandrify. Mandritra ny fandidiana, ny fehin-kibo fehin-kibo dia miaraka amin'ny aloka amin'ny nosy mba hampitaingina ny hery sy ny hery. Karazana fehikibo vaovao misy tombony amin'ny fandefasana fitaovam-pandehanana sy ny famitana fitaovam-pandehanana vita amin'ny gadra.
Fiomanana amin'ny fametrahana sy fampiasana ny fehin-kibo sy ny kodiarana:
Mampihena ny halaviran'ny afovoany. Raha misy fihenjanana, tokony havoaka aloha, ary avy eo hanamboatra ny elanelan-afovoany aorian'ny fametrahana ny fehikibo. Ho an'ny fampitana miaraka amin'ny elanelan'ny afovoany maharitra dia tokony esorina aloha ny polley, ary avy eo dia asiana fehin-kibo ny fehikibo, ary avy eo dia apetraka eo amin'ny hazo io ny paosy mba hanamboarana azy.
Previous: Famoriam-bola mitahiry fivarotana
Manaraka: System Lubrication
Fehin-kibo tsara indrindra any Chine
Fehikibo tsara kalitao
Fehin-kintan'ny Teech avo kokoa
Fehin-kibo fametahana milina fanoratana
Fitaovana fahasivana lavitra